SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Zvakaita dzimba dzavo muTash Rabat Valley
KYRGYZSTAN inyika yekuCentral Asia ine makomo marefu-refu anenge akaita kufukidzwa nechando uye yakavakidzana nenyika dzinoti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, neChina. Inenge 90 muzana yenyika iyi makomo ega ega. Pane makomo anonzi Tian Shan uye nhongonya yemakomo iwayo iri muKyrgyzstan. Kuti munhu asvike pamusoro-soro paro pakareba mamita 7 439. Inenge 4 muzana yenyika iyi masango. Asi chinoshamisa ndechekuti inotoverengwawo panyika dzine nzungu dzakawanda dzemusango.
Zvapupu zvaJehovha zviri kudzidzisa vanhu vakawanda Bhaibheri muKyrgyzstan
Vanhu vekuKyrgyzstan vanozivikanwa nekugamuchira vaeni zvakanaka uye nekuremekedza vamwe. Kana vachitaura nemunhu mukuru, vanoshandisa mashoko ekuremekedza akadai seekuti “imi” uye kana vari mubhazi vanosimukirawo vanhu vakuru, kana yava nguva yekudya vanhu vakuru vanopiwa pekugara pakanaka.
Mhuri inowanzoita vana vatatu kana kupfuura. Mukomana wekupedzisira anowanzoramba achigara nevabereki kunyange aroora, achivachengeta kusvika vafa.
Vasikana vanodzidziswa mabasa epamba kubva vachiri vadiki. Pavanozosvika makore ekuma16 vanenge vava kutogona mabasa epamba. Kana vava kunoroorwa mhuri yavo inovapa zvinhu zvekunoshandisa. Zvimwe zvacho zvinosanganisira magumbezi, hembe, uye kapeti yakagadzirwa nemaoko. Mukomana ndiye anobhadhara mari yeroora uye nezvipfuwo pamusoro.
Pavanoita mabiko kana kuti pavanenge vari parufu, vanouraya gwai kana kuti bhiza. Pakupakura pane nyama inonzi inopiwa vana vadiki kana kuti vanhu vakuru uye vaenzi vanoremekedzwa. Chikafu chavanonyanya kudya chinonzi beshbarmak uye ndicho chavanodyisa nenyama. Vanochidya nemaoko.
Komuz ndicho chiridzwa chinoshandiswa nevakawanda
Bhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rinowanikawo mumutauro wechiKirghiz pawww.jw.org
Vagari vemo: 5 776 000
Guta guru: Bishkek
Mitauro: Kirghiz nechiRussian
Zvavanotengesa kune dzimwe nyika: Donje, shinda, goridhe, mercury, uranium
Chitendero: Vakawanda vavo vanopinda chiIslam
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kushanya kuKyrgyzstan
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe MUKAI! Kuzvidzora Pakuita Zvawakajaira